Iindaba-iMiningMetals Uzbekistan 2022
Inkampani yethu ithathe inxaxheba kuMboniso we-16 waMazwe ngaMazwe ongoMgodi, iMetallurgy kunye nokusebenza kwesinyithi-iMiningMetals Uzbekistan 2022
Ukusukela nge-3 kaNovemba ukuya kowe-5, ngo-2021, inkampani yethu ithathe inxaxheba kuMboniso we-2021 China Shandong Export Commodities (Uzbekistan) obekwe kwiMiboniso ye-Itec (Anhor Park Lokomotiv, Labzad Avenue 12/1) kwaye ibe yimpumelelo epheleleyo.Kulo mboniso, abathengi babonise umdla omkhulu kwiimveliso zethu kwaye bancoma ukuyila kunye nengqiqo yesayensi kunye nobuchwepheshe beemveliso zethu.
Baninzi abasasazi bendawo kunye nabavelisi abanamandla abathatha inxaxheba kulo mboniso.Inkampani yethu ithatha ithuba lokwazisa eyona mveliso yethu iphambili-isixhobo sokukhenkceza ngokukhawuleza, umgca wemveliso wokuqhotsa, imbiza yokuvala inzala, umatshini wokupakisha wefilimu kunye ne-vacuum fryer, njl., kubathengi abatsha.Inkcubeko yenkampani, ukukhuthaza ukuthandwa kohlobo lwethu, kunye nokugcina unolwazi ngeemeko zentengiso yasekhaya, iimfuno, njl.
Ngalo mboniso, inkampani yethu ifumanise ukuba ishishini lokutya lasekhaya linamandla amakhulu ophuhliso kunye namathemba emarike abanzi.Kulo mboniso, inkampani yethu ikhuthaze inkcubeko yenkampani kwaye yazisa iimveliso zethu nge-intuitively.Ngalo mboniso, ndiye ndafunda malunga nophuhliso lwamva nje lwemarike, ndanxibelelana nabathengi ngeengcamango zobugcisa, ndichwetheza abo banokuba ngabathengi, ndaza ndandisa isabelo semarike sezixhobo zethu.
Iimveliso ezibonisiweyo ngeli xesha zonke ziluhlu lweemveliso ezintsha eziye zarhoxiswa yinkampani kwisiqingatha sokuqala sonyaka, ezingagcini nje ukutyebisa ikhonkco lemveliso ekhoyo, kodwa iphakamisa kakhulu ukhuphiswano olubanzi lweemveliso.Iimveliso ziyinoveli, zigcwele ingqiqo yesayensi kunye netekhnoloji, kunye nobugcisa obugqwesileyo.Ukuqondwa kunye nendumiso evela kubathengi ababonisayo.
Iqonga lomboniso ladibanisa iinkampani ezahlukeneyo zemveliso eziphuma kulo lonke ilizwe, nto leyo ebonisa ukukhula okukhawulezayo koshishino lwemveliso yelizwe lam.Oomatshini bethu be-INCHOI baya kuqhubeka nokuphucula umgangatho wemveliso kunye nenkonzo emva kokuthengisa kwixesha elizayo ngokusekelwe kumgaqo wophuhliso oluzinzileyo.
Ngalo mboniso, inkampani yethu izuze okuninzi.Siza kuqhubeka nokusebenza nzima ukwazisa abantu abaninzi ngohlobo lwethu lwe-INCHOI kunye nokubonelela abathengi ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu.